अरब संस्कृति | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | संस्कृति
हामी विविध संसारमा बस्छौं र यो विविधता हो जसले हामीलाई प्रजातिको रूपमा यत्तिको चाखलाग्दो बनाउँछ। आज हामी यो हेर्नेछौं अरबी संस्कृतिविचार गर्दै, तर एकै साथ मिडियाले हामीलाई यसको बारे हामीलाई दिने छविबाट टाढा जानको लागि।
पत्ता लगाउनुहोस्, सिक्नुहोस्, मान, सम्मान, ती एक राम्रो सांस्कृतिक सह-अस्तित्व को जादू शब्द हो। आज, तब, अरब संस्कृति हाम्रो लेखको नायक हुनेछ।
पहिले तपाईंले यो बुझ्नु पर्छ अरब संस्कृति र इस्लाम निकट सम्बन्धित छ। विश्व बैंकका अनुसार २०१ 2017 सम्ममा यस्तो अनुमान गरिएको थियो विश्वको अरब जनसंख्या 414.5१22..XNUMX मिलियन थियो मुख्यतया २२ देशहरूमा तिनीहरू मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकामा छन्। टर्की र इरान यस समूहमा छैनन् किनकि उनीहरू टर्की बोल्छन् वा फारसी।
यद्यपि त्यहाँ अन्य धर्महरू छन् इस्लाम मुख्य धर्म होलगभग 93।% जनसंख्या मुस्लिम हो र इसाईहरूले same% यस क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्दछन्। इस्लाम कुरान द्वारा शासित छ, एउटा पुस्तक प्रधान दूत गेब्रिएल मार्फत परमेश्वर आफैले अगमवक्ता मुहम्मदलाई प्रकट गरिएको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। इस्लामी कानून शरिया को रूप मा परिचित छ र यो धेरै देशहरूमा संविधानहरू र धर्मनिरपेक्ष कानूनहरूको अभिन्न अंग भएको छ।
शरिया, एल क्यामिनो, सम्पूर्ण अरब मूल्य प्रणालीको आधार हो। यसलाई पाँच भागमा बाँडिएको छ: न्याय, शिक्षा, सार्वजनिक र निजी नैतिकता स्थापना, समाजमा व्यक्तिगत कठिनाइहरूको रोकथाम र दमनको रोकथाम। सत्य यो हो प्रत्येक अरब देशले इस्लामको बिभिन्न अर्थ लगाउँदछ, केहि अरुहरु भन्दा कडा हुनुलाई मृत्युदण्डको सजाय पनि छ (उदाहरणका लागि चोरहरुको हात काट्नु)।
मुस्लिम उनीहरूले दिनमा पाँच पटक प्रार्थना गर्छन् र सबै जीवन ती moments क्षणहरूको वरिपरि संगठित छ। मस्जिदमा महिलाहरूले भद्र पहिरन लगाउँछन् र टाउको छोप्दछन्, सबैजनाले आफ्नो जुत्ता खोल्छन् र पुरुष र महिलाहरू अलग रहन्छन्। को समयमा रमादम, नवौं महिना, पवित्र, मुस्लिम क्यालेन्डर अनुसार, मान्छेहरु छिटो सूर्योदय देखि सूर्यास्त सम्म।
अरब संस्कृति मा परिवार महत्वपूर्ण छ र एक तरीकाले आदिवासी जडानहरू राखिएको छ, साथ साथै कुल जडानहरू। "मेरा भाइहरू र म मेरा काचेजहरू, मेरा काचेज भाइहरू र म अपरिचितको बिरूद्ध" छ भन्ने अभिव्यक्तिले उनीहरूलाई राम्ररी चित्रित गर्छ। वंशावली पनि महत्त्वपूर्ण छ। एक हो पितृसत्तात्मक संस्कृति जसमा मानिस आफ्नो परिवारको ख्याल राख्छ र यदि ऊ असम्भव छ भने, यो लाजमर्दो छ। आमाको परम्परागत भूमिका छ र उहाँ घरमा बस्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई हुर्काउँदै, घर प्रबन्ध गर्न।
बच्चाहरू फरक तरीकाले हुर्काइन्छन्, तिनीहरू चाहे पुरुष वा महिला हुन्। बच्चाहरूले केवल विवाह गरे पछि घर छोड्छन् र सामान्यतया तिनीहरू मध्ये केवल एक आमा बुबाको घरमा बस्छ तिनीहरूको हेरचाह गर्न। क) हो, अरब संस्कृतिले आफ्ना एल्डरहरूलाई सम्मान गर्छ। तिनीहरू धेरै मुद्दाहरूमा परामर्श लिन्छन्, जब उनीहरूले जे भन्छन् स्वीकार्य हुँदैन। यी देशहरूमा स्वास्थ्य प्रणाली सामान्यतया राम्रो हुँदैन, त्यसैले जवान महिलाहरू सामान्यतया आफ्ना आमाहरूलाई वा आमा बुहारीहरूमा आफ्ना बच्चाहरूको पालनपोषणमा ठूलो भर पर्दछन्।
अरब संस्कृति पनि उनी आफ्नो गोपनीयतामा ईर्ष्या गर्छिन् र पारिवारिक मामिलाहरू मात्र कसैको अघि विरलै चर्चा गरिन्छ। यो गोपनीयता घरहरूको वास्तुकलामा अनुवाद गरिएको छ, जहाँ त्यहाँ सामान्य क्षेत्रहरू छन् जहाँ आगन्तुकहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र जहाँ तिनीहरू कहिल्यै प्रवेश गर्दैनन्।
एक अरब र एक आगन्तुक बीचको सम्बन्ध कस्तो छ? सामान्य कुरा यो हो कि यदि हामी त्यहाँ कोठामा प्रवेश गर्छौं जहाँ अरबहरू छन् उनीहरू हामीलाई स्वागत गर्न उठ्छन्। महिलाहरु छोइदैनन्, जबसम्म कि अरबली महिलाले पहिले उनीको हात समात्छिन्, उनीहरूलाई तपाईसँग परिचय गराउन अघि या त उनीहरूसँग कुरा गरिदैन, र एक अरब मान्छेलाई आफ्नी श्रीमती वा छोरीहरुका बारे सोधिदैन।
अन्य धेरै संस्कृतिहरूमा जस्तै उपहार ल्याउनु भनेको सबै भन्दा शिष्ट कुरा हो। पिउन निम्तो अस्वीकार नगर्नुहोस् र तपाइँसँग छ सधैं तपाईंको दाहिने हात प्रयोग गर्नुहोस् जब खान, पिउने वा खाना र पेय पास गर्दै। खाना अरबको संस्कृतिमा महत्त्वपूर्ण छ, रोटी बाँडफाँड, माछा र भेडाको खानु।
त्यहाँ भित्र केहि फरक छ अरबको पहिरन? सत्य यो हो कि चलनहरू देश देखि फरक फरक हुन्छन्, कहिलेकाँही त्यहाँ राष्ट्रिय पोशाक हुन्छन् वा महिलाले आवश्यक रूपमा लगाएको हुनुपर्दछ hijab वा एक बुर्का उसको सम्पूर्ण शरीर लुकाईरहेको छ। अरूमा भने कपडा एकदम पश्चिमी हुन्।
जे भए पनि, सधैं यो विनम्रता को गुण द्वारा केहि क्षेत्रहरु लाई कवर गर्न सही छ: काँध र हतियार यसको मतलब यो होइन कि सब भन्दा आधुनिक देशहरूमा धेरै आधुनिक केटीहरूले छोटो-बाहुली शर्ट वा कडा जीन्स लगाउँदैनन्। तर, हो, यदि हामी एक अरब देश को यात्रा गर्न जाँदैछु, हामीले सामान्य कपडा प्याक गर्नै पर्छ।
यो सत्य हो कि तिनीहरू तातो ठाउँहरू हुन् र केवल एक मात्र शर्ट्स लगाउन चाहन्छ तर यहाँ वरिपरिको महिलाले कहिल्यै यस प्रकारको कपडा प्रयोग गर्दैन, र त्यसकारण हामी धेरै नकारात्मक ध्यान प्राप्त गर्दैछौं। सायद दुबई वा यस क्षेत्रका अन्य देशहरू बढी आराम पाएका छन्, तर हामीले अरब संस्कृति कस्तो छ भनेर बिर्सनु हुँदैन।
अब, अरबी संस्कृतिले आज भएका सुविधाहरू भन्दा टाढा, र यात्रा गर्दा सुपर आवश्यक, तपाईंले थाहा पाउनुपर्दछ अरब संस्कृति धनी छ जहाँ तपाईं यसलाई हेर्नुहुन्छ। को अरबी साहित्यe खजाना भरिएको छ, उही संगीत र नृत्य र स्वतन्त्र भएदेखि यता युरोपियन देशहरूका उपनिवेशहरू थिए, सिनेमा। उनीबाट अलि कम सिक्नु सधैं राम्रो हुन्छ, किनकि यसले हामीलाई समृद्ध बनाउँछ।
अब, अवश्य पनि, एक महिलाको रूपमा त्यहाँ धेरै मुद्दाहरू छन् जुन मलाई मनपर्दैन। आज धेरै, संसारका धेरै भागहरूमा हामी त्यस्तै माचो विश्व समाजमा हाम्रो अधिकारका लागि लडिरहेका छौं। तर म आशावादी छु र प्रयास गर्छु त्यसो भए एथनोसेन्ट्रिक नहुनुहोस्.
म सोच्न रुचाउँछु संस्कृति भाषा जस्तो हो। हामी सबै संस्कृतिविहीन हो किनकि हामी एक वा अर्को संस्कृतिको वाहक हौं, र जबसम्म त्यो संस्कृति जीवित छ यो सधैं परिवर्तनको बिषय हो। जिब्रो जस्तै। यसैले, भूमण्डलीकृत विश्व जहाँ हामी बस्दछौं ती सबै अधिक परम्परागत संस्कृतिहरूलाई परिवर्तनको लागि धकेल्दै छ। आशा छ यी देशहरूमा सकारात्मक परिवर्तनहरू खोज्ने महिलाहरू उनीहरूको मार्गमा अघि बढ्न सक्षम हुनेछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » संस्कृति » अरब संस्कृति
Lausanne, स्विस शहर मा आवश्यक